Deadpool ခန္တာကိုယ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ထူးဆန်းမှူ ၅ ခု အကြောင်း သိပြီးပြီလား? • TECH CORNER
Deadpool ခန္တာကိုယ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ထူးဆန်းမှူ ၅ ခု အကြောင်း သိပြီးပြီလား?
Wade Wilson (Deadpool) ဆိုတဲ့ character ကတော့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို ထိန်းသိမ်းရာမှာ သိပ်ပြီး တော်လေ့မရှိပါဘူး။ တရားစပ် လွှတ်နေတဲ့ သူ့ရဲ့ Motor လို ပါးစပ်ကနေ လျှို့ဝှက်ချက်ပေါင်းများစွာ ပြောခဲ့ဖူးသလို သူ့ ခန္တာကိုယ်ပေါ်က ထူးဆန်းမှူတွေကိုပါ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဆိုတော့ ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ?
(Tech Corner ရဲ့ Page အခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Hero Corner မှာ Super Hero Facts တွေနဲ့ နောက်ဆုံးရ သတင်းတွေကို ကျွန်တော် BlueScar က အားရင် အားသလို ရေးသားတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပါ။ Geek တစ်ယောက်မဟုတ်ပဲ SuperHero Fan တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရေးသားတဲ့ facts တွေမှာ အမှား၊ အလွဲ တွေရှိခဲ့ရင် သည်းခံပေးဖို့နဲ့ အမှားပြင်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါရစေ။)
1.Deadpool is notamutant
Deadpool က X Men (Mutants) အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ပတ်သက်မှူရှိနေပေမဲ့ သူကိုယ်တိုင်က Mutant တစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ Canadian special services ထဲမှာ expert assassin ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ Wade Wilson ဟာ ရိုးရိုး သာမန်လူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Wolverine ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ Weapon X Program ကနေ Wolverine ရဲ့ healing factor တွေကို Deadpool ရဲ့ ကင်ဆာကို ကုသဖို့ အသုံးချရာက နေ mutate ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ X Men universe ထဲက mutants တွေလိုမျိုး မွေးရာပါ စွမ်းရည်တွေနဲ့ mutant မဟုတ်ခဲ့ဘူးပေါ့။ ပြီးတော့ Wolverine ရဲ့ healing factor တွေကြောင့် Deadpool ရဲ့ DNA ထဲမှာ wolverine ရဲ့ DNA လဲ ပါဝင်နေပါတယ်။
2.Deadpool Healing Factor
Wolverine ဆီကနေ Healing factor ရရှိခဲ့တဲ့ Deadpool ကတော့ wolverine ထက် ပိုပြီး သာတယ်လို့ Marvel Wiki မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒဏ်ရာ အသေးလေးတွေဆိုရင် Wolverine က heal တာ ပိုပြီး မြန်ပေမဲ့ ခြေထောက်ပြတ်သွားတဲ့ ကိစ္စမျိုးမှာဆိုရင် ၃ ရက်ကြာတဲ့အထိ Wolverine က အပြည့်အဝ ပြန် မ heal သေးပေမဲ့ Deadpool ကတော့ ပြန်ပြီး Ok နေပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ ခေါင်းပြတ်သွားရင်တောင် ပြန်ပြီး အသစ်ထွက်လာနိုင်သလို ပြာဖြစ်တဲ့အထိ မီးရှို့ပစ်ခံလိုက်ရရင်လဲ ပြန်ပြီး heal နိုင်ပါတယ်။
3. Deadpool Cancer
Deadpool က သူ့ရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို strength အဖြစ် ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ်။ Weapon X Program မှာတုန်းက အသုံးပြုခဲ့တဲ့ Healing factor ဟာ သူ့ရဲ့ cancer ကို ကုသမပေးနိုင်ပါဘူး။ အဲ့အစား healing factor ကြောင့် cancer cells တွေက ပိုတောင်အားကောင်းလာပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ healing factor ကြောင့်ပဲ သူ့ရဲ့ ပုံမှန် healthy cells တွေက ပြန်ပြန်ကောင်းနေလို့ cancer ကလဲ မသတ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီလို ကင်ဆာနဲ့ healing factor ဒစ်လည်နေတာကြောင့် သူ့ခန္တာကိုယ်က အနံ့တွေနဲ့ သူ့ ရူပကာ က အခုလို ဖြစ်နေတာပါ။
4.Deadpool Blood is Poison
Deadpool ရဲ့ သွေးဟာ Dracula လို vampires တွေအတွက် အဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Deadpool ဆီက healing factor ကို copy ကူးတာမျိုးလဲ လုပ်လို့မရပါဘူး။ တစ်ခါက alien Skrulls ဟာ Deadpool ရဲ့ healing factor နဲ့ Alien Army လုပ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။
5.Deadpool နဲ့ Spidey မှာ ကလေးတစ်ယောက် ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်
Deadpool နဲ့ Spidey ဟာ အတော်လေး နီးစပ်မှူရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး romantic paring လို့ ဆိုရမှာပါ။ Patient Zero ဆိုတဲ့ Mad Villian ဟာ Spidey နဲ့ Deadpool ရဲ့ genes တွေကို အသုံးပြုပြီး Bitsy ဆိုတဲ့ ကလေးမ လေးတစ်ယောက် မွေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
Ref: CBR, Screenrant | Featured Image credit to cNet
MarvelMarvel ComicsSuperHeroSuperHero Facts
X-Men Universe ရဲ့ Powerful Mutant ကြီး Magneto အကြောင်း ဘယ်လောက်သိပြီးပြီလဲ?
Post Views: 814 Facebook0Tweet0Email0Share0Shares0 အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ … ဒီနေ့မှာတော့ X-Men Universe ရဲ့ Powerful Mutant ကြီး Magneto
Marvel Comics သမိုင်းတစ်လျှောက် အကြမ်းဆုံး၊ အပြင်းထန်ဆုံး တိုက်ပွဲ ၁၀ ခု
Post Views: 1,598 Facebook0Tweet0Email0Share0Shares0 Marvel ရဲ့ Comics တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ SuperHeroes ချစ်သူတွေရဲ့ စိတ်နှလုံးကို ဖမ်းစားလာတာ အချိန်အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ ဒီနေ့မှာတော့